एक वर्षमै थपिए साढे ४ लाख फिक्स्ड ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता – Insurance Khabar
एक वर्षमै थपिए साढे ४ लाख फिक्स्ड ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७८, सोमबार ०७:१०
काठमाण्डौं । फाइबर र वायरलेस इन्टरनेटको माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक एक वर्षमै ४ लाख ६१ हजार थपिएका छन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ग्राहकको संख्या १६ लाख ३२ हजार ७ सय ६४ जना पुगेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो आ.व.मा जम्मा ११ लाख ७१ हजार ३ सय ३३ ग्राहक संख्या रहेकोमा गत आ.व.मा ४ लाख ६१ हजार ग्राहक थपिएका हुन् । यसमा मोबाइलमार्फत् इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या जोडिएको छैन ।
कोरोना महामारीको कारण कार्यालयहरुले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाएको र विद्यार्थीहरुलाई समेत घरबाटै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता वृछि भएको हो । देशभर हाल ४४ वटा कम्पनीले फाइबर र वायरलेशमाध्यमबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले जारी गरेको आ.व. २०७७।७८ असारमसान्तको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी वल्र्डलिंकको ४ लाख ८५ हजार १ सय ३९ ग्राहक रहेका छन् । यीमध्ये वल्र्डलिंकसँग फाइबर लिंक ग्राहक ४ लाख ८३ हजार ३ सय ९९ रहेको छ । वल्र्ड लिंकले एक वर्षको अवधिमा २९ प्रतिशतले ग्राहक संख्या वृद्धि गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आ.व. ७६।७७ मा वल्र्डलिंकसँग जम्मा ३ लाख ७५ हजार ८ सय ३३ वटा ग्राहक रहेको थियो ।
दोश्रोमा नेपाल टेलिकमसँग २ लाख ९० हजार ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ग्राहक रहेका छन् । यो मध्ये टेलिकमले फाइबर टु होम सेवामार्फत् १ लाख २२ हजार १ सय १० वटा ग्राहकको घरदैलोमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । टेलिकमले अघिल्लो आ.व.को तुलनामा ग्राहक संख्यामा जम्मा १६ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ ।
ग्राहक संख्याको आधारमा २ लाख १० हजार ग्राहकसहित तेश्रो ठूलो सेवा प्रदायकको रुपमा सुबिसु केबल नेट रहेको छ । सुबिसु केबलले एक वर्षको अवधिमा ५३ प्रतिशतले ग्राहक संख्या थपेर १ लाख ४९ हजार ७ सय २९ बाट २ लाख १० हजार पुर्याएको छ ।
सस्तोमा इन्टरनेट सेवा वितरण गरेर काठमाण्डौं उपत्यकामा ग्राहक संख्या वृद्धि गरेको क्लासिक टेकसँग गत असारसम्ममा १ लाख ५७ हजार ८ सय ८५ वटा ग्राहक रहेको छ । क्लासिकले एक आ.व.को अवधिमा ग्राहक संख्यामा ४५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । त्यसैगरी पाँचौं स्थानमा रहेको भायानेटसँग १ लाख ५२ हजार ग्राहक छ । भायानेटको ग्राहक संख्या झण्डै ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा सर्वाधिक क्षमताको इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेर बजारमा प्रवेश गरेको चौधरी समूहको सिजि कम्युनिकेशन प्रा.लि.सँग गत असार मसान्तसम्ममा ५ सय ६७ वटा ग्राहक रहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रुपमा रहेको सबैभन्दा पुरानो कम्पनीको रुपमा रहेको मर्केन्टाइल कम्युनिकेशनको ग्राहक संख्या झिनो अंकले बढेको छ । अघिल्लो आ.व.मा २ हजार ७८ वटा ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरेको मर्केन्टाइलसँग गत आ.व.मा २ हजार २ सय ७५ वटा मात्र ग्राहक रहेको छ ।
आज अन्तिम दिन साहस उर्जाको आइपीओमा कति पर्यो आवेदन ?
दुई महिनामा जीवन बीमा कम्पनीले संकलन गरे २८ अर्ब १५ करोड बीमा शुल्क (सूचिसहित)
हाइड्रोपावरले हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउने,यस्तो छ नयाँ निर्देशिका